ကျောင်းသူ​လေးက ​ကျောင်းသားကို ဖိုမ ဆက်​ဆံဖို့အတွက်​ စာ​ရေးသားကမ်းလှမ်းခဲ့…
August 23, 2019 Thuta Star 0
ဆွံ့အသွား​စေတဲ့သတင်းပါပဲ။ မ​လေးရှားနို​င်​ငံက ၁၁ နှစ်​အရွယ်​ ​ကျောင်းသူ​လေးဟာ အသက်​ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ ​ကျောင်းသားကို ရည်းစားစာ​ရေးပို့ပြီး သူတို့ချင်း ဖိုမဆက်​ဆံဖို့ကိစ္စအတွက်​ စာ​ရေးသားကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်​လို့ Worldofbuzz သတင်း Website တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း အံ့သြတုန်​လှုပ်​ဖွယ်​ရာတွေ့ရှိရပါတယ်​။ ​ကျောင်းသူ​လေးဟာ အဲ့ဒီ ရည်းစားစာကို လက်​​ရေးနဲ့ကိုယ်​တိုင်​​ရေးသားထားခဲ့ပြီး စာရဲ့အစမှာ ​ကောင်​​လေးဆီ […]
မြိတ်တွင် ကောက်ရသည့် ငွေ ၁၉ သိန်းကျော် အား ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့သူ
မြိတ်တွင် ကောက်ရသည့် ငွေ ၁၉ သိန်းကျော် အား ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ခဲ့သူ မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင် နယ်မြေ ၊ မြို့မ ၁ ရပ် ဇေတဝန် ဘုန်းကြီး ကျောင်း အနီးမှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ၊ ညနေ […]
ဖုန်းအားသွင်း​ရင်း ဖုန်းသုံးတဲ့ က​လေး ဓာတ်​လိုက်​​သေဆုံး ( ကလေးမိဘများ သတိပြုနိုင်ရန် )…
နည်းပညာနဲ့ နည်းပညာအသုံးအ​ဆောင်​ ​ခေတ်မီ​အိုင်​တီပစ္စည်း​တွေဆိုတာ ​ဒီဘက်​​ခေတ်​မှာ လူတိုင်း​ရှောင်​လို့လွှဲလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်​​တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်​က​တော့ စမတ်​ဖုန်း​တွေပါ။ ဒီ​နေရာမှာအထူးသတိပြုစရာက​တော့ ဖုန်းကို လက်​မချစတမ်း စွဲလန်းစွာအသုံးပြု​နေသူ​တွေအတွက်​ သတိပြုဆင်​ခြင်​စရာဖြစ်​ရပ်​တစ်​ခုဖြစ်​ပွားခဲ့ပါတယ်​။ Daily Mail သတင်းစာ ရဲ့ ​ဖော်​ပြချက်​အရ တရုတ်​ပြည်​က အသက်​ ၁၃ နှစ်​အရွယ်​ Liu ဆိုတဲ့ ဆယ်​​ကျော်​သက်​က​လေးငယ်​ဟာ […]
နိုင်ငံခြားသားနဲ့မြန်မာ ကွာခြားပုံကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သင်ဇာဝင့်ကျော်က မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံခြားသားချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲထားပေမယ့်လည်း ထွေထွေထူးထူးအသည်းကွဲနေတာမျိုးမတွေ့ရပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သာအေးအေးလူလူဆက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ သင်ဇာက မကြာမီက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပေမယ့်သိပ်မခံစားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်။ သင်ဇာက ပွဲတက်တွေများပြီး ကားရိုက်နည်းလို့ ပွဲတက်မင်းသမီးဖြစ်သွားမှာမစိုးရိမ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ် “ပွဲတက်တာက သိပ်မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်။ နယ်ပွဲတွေကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်။ အချိန်လည်းပေးရတာကို။ သရုပ်ဆောင်လည်းသရုပ်ဆာင်အလျောက်ပေါ့နော်။ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေ ဇာတ်လမ်းလေးတွေစုထားတယ်။အဲဒီဟာအတွက်အချိန်သေချာပေးပြီးကိုရိုက်မှာ။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် လာတဲ့ဇာတ်တိုင်းကိုတော့ လက်မခံဖြစ်တော့ဘူး”လို့ ပြောပြထားပါတယ်။ […]
သိမ်ဖြူဂုံး တံတားအောက် တွင် ၇ နှစ် အရွယ် မိန်းခလေး အား သတ်ပြီး ဆာလာအိပ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့သူဟုယူဆရတဲ့ ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် သိမ်ဖြူ ဂုံးတံတားအောက်တွင် အသက် ၇ နှစ်အရွယ် မိန်းခလေးတစ်ဦး အဝတ်အစားမပါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဒဏ်ရာများရှိပြီး ဆာလာအိတ်နှင့်ထုပ်လျှက် သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သေဆုံးသူ မိန်းခလေးသည် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးဝန်းကျင်၌တောင်းရမ်းစားသောက်သူသူဖြစ်ပြီးအခြေအနေမဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ တရားခံသည် ၄င်းတို့ထံ ဝင်ထွက်သွားလာတတ်သူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌စုဆောင်းရေးလူပွဲစားလုပ်ကိုင်နေ သူဖြစ်ပါသည်။အမည်နှင့်နေရပ်လိပ်စာ မသိသေးပါ။ တရားခံ၏ညာဘက်လက်ခုံ လက်မနှင့်လက်ညှိုးဂွတွင် ကင်းမြီးကောက်ပုံ တက်တူးရှိပါသည်။ […]
ချစ်​သူ မိမိထံအမြန်​ဆုံးပြန်​လာရန်​ အစီအရင်​
ချစ်​သူ မိမိထံအမြန်​ဆုံးပြန်​လာရန်​ အစီအရင်​🔯 ချစ်သူ က မိမိကို ချစ်ကြိုက်ပြီးမှ အဆက်အသွယ်ဖြတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား?ချစ်သူက အတည်တကျ လက်ထပ်မယ်ပြောဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ ထားသွားခြင်းကိုခံနေရပြီလား? အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျား မယားငယ် ယူထားလို့အိမ်ရှင်မများစိတ်သောကရောက်နေပြီလား? လိုအပ်​တာက​တော့- 👉စတီးပန်ကန်ပြား ၁ချပ် 👉ဆန် ၁ဘူး 👉 ကွမ်းရွက်​ ၃ရွက်​ 👉ဖ​ယောင်းတိုင်​ အဝါ […]
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးကြောင့် လင်ကြီးနဲ့လင်ငယ် လမ်းပေါ်မှာ ဓားချင်းခုတ်တဲ့ပွဲ (ရုပ်သံ)….
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ တိုလီမာမြို့မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နောက်မီးလင်းတဲ့ကိစ္စကို လင်ကြီးနဲ့လင်ငယ် လမ်းမပေါ်မှာပဲ ဓားချင်း ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ လင်ကြီးကတော့ အသက်(၄၅)ဖြစ်ပြီး၊ လင်ငယ်ဖြစ်သူကတော့ အသက်(၃၅)ပါ။ လင်ကြီးဟာ မယားလုဘက် လင်ငယ်ကို ဓားနဲ့မိုးခုတ်နေပြီး၊ လင်ငယ်ကတော့ ကုလားထိုင်လေးတစ်လုံးနဲ့ ပြန်ပြီး ခုခံနေရတာပါ။ ဘေးမှာ လူ(၂၀)လောက် ရှိပေမယ့်၊ ဘယ်သူမှ […]
ဝမ်းချုပ်လို့ဆေးခန်းလာတဲ့ ၁၃နှစ်သမီးလေးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကို စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်​
ဝမ်းဗိုက်ကို စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ ကလေးငယ်ဟာ ဝမ်းချုပ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဝန် ၁၄ပတ်ရှိနေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် …။ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်က အမည်မသ် အသက်၁၃နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို အသက် ၇၀ အရွယ် Renaud Jerome ဆိုသူက ဖလော်ရီဒါ ၊ ပွန်ပါနိုကမ်းခြေက မြောက်ဘရိုဝက်ဆေးဌာနကို […]
မိဘတွေက သဘောမတူဘဲ ဖြတ်ခိုင်းလို့ ရေထဲကိုခုန်ချခဲ့တဲ့ (၁၃)နှစ်အရွယ် ချစ်သူနှစ်ဦး
ထိုင်းနိုင်ငံက အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်က မြစ်ထဲကို ခုန်ချ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သေကြောင်းကြံစည်ဖို့ လိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အချစ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ မသေဘူးလို့ သက်သေပြဖို့ပါတဲ့။ ကလေးမလေးရဲ့ မအေဖြစ်သူက သူ့သမီးအကြောင်းကို အရင်သိခဲ့တာပါ။ ကနဦးတုန်းက သာမန်သာတားမြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ နောက်တော့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့အထိ […]
သမီးရည်းစားဘဝမှာ ကိုယ့်စည်း၊ သူ့စည်းလေးနဲ့ မနေဘဲ အတင်းကာရောတွေ တက် Ro ကြတာကိုး..
မြန်မာပြည်ကရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာနဲ့ တရားထထစွဲနေကြတဲ့ထူးခြားဆန်းကြယ်သော ပုဒ်မ (ပန်ဆယ်လို) မြန်မာပြည်က ဥပဒေတွေထဲမှာ ကာမလိမ်လည်မှုပုဒ်မဆိုတာကြီးက တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ထားပါ… ကိုယ်တွေ မမွေးခင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဥပဒေလား မသိ။ ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာနဲ့ တရားထထစွဲနေတာတွေ မြင်ရတွေ့ရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ Personal ကိစ္စတွေတော့ သိလည်း မသိဘူး၊ စိတ်လည်း […]